China Tapered ala biarin factory na-emepụta | Na-emighị emeri Yong
Tapered ala amị bụ a iche iche ụdị amị. Nrụgide ya na mgbanaka na mgbanaka dị n'ime nke ụlọ bụ ihe mejupụtara ya, nke enwere ike itinye ya iche na mgbanaka mpụga. Ihe mgbaaka ndị dị n’ime na nke dị n’elu nke nwere ebe a rịrị awụ, e wee wụnye rollers ndị a wụnyere n’etiti ụzọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na ndị conical elu agbatịwo, onu ire nke cone elu nke mgbanaka dị n'ime, mgbanaka elu na ala na-agwakọta na isi nke axis agba.
Na mgbakwunye na metric usoro, tapered ala biarin nwekwara English usoro. Koodu na akụkụ nke usoro metric kwekọrọ n'ụkpụrụ ISO, na usoro Britain kwekọrọ n'ụkpụrụ AFBMA.
Nhazi na njirimara
Tapered ala biarin nwere dị iche iche owuwu, dị ka otu ahiri, abụọ n'usoro na anọ n'ahịrị tapered ala biarin. Iji gbochie mbibi na-ebibi ihe n'etiti igwe na agba ọsọ nke ike na-adịghị arụ ọrụ na-akpata mgbe eburu na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ihe nrụpụta ahụ ga-ebu ibu ụfọdụ.
Tapered ala amị kwesịrị ekwesị maka agba radial ibu, unidirectional axial ibu na jikọtara radial na axial ibu. The axial ibu ikike nke tapered ala biarin na-adabere na kọntaktị n'akuku α, ya bụ, ná mpụga mgbanaka raceway n'akuku. Nnukwu kọntaktị kọntaktị α, ka ukwuu nke ike axial ibu.
Single n'usoro tapered ala amị
Kinddị nke a nwere ike ime ka mwepu nke axial ma ọ bụ shei kwụsị n'otu ntụziaka ma na-ebu ibu axial n'otu ụzọ. N'okpuru ọrụ nke ibu radial, a ga-emepụta ike akụrụngwa axial, nke a ga-edozi. Ya mere, na nkwado abụọ nke osisi ahụ, a ghaghị iji ihe nkedo abụọ ahụ mee ihe ihu na ihu ma ọ bụ nhazi azụ.
Ugboro abụọ n'ahịrị tapered ala amị
Mgbaaka nke mpụta (ma ọ bụ nke dị n’ime) bụ nke dum. Obere ihu njedebe nke mgbanaka abụọ dị n'ime (ma ọ bụ mgbanaka mpụta) yiri, ma enwere nkedo n'etiti. A na-agbanwe nwechapụ ahụ site na ọkpụrụkpụ nke mgbanaka spacer. Kinddị nke a nwere ike iburu ibu radial na ibu axial bi-directional n'otu oge. O nwere ike igbochi mwepụ bidirectional axial nke iburu ma ọ bụ shei n'ime njedebe sara mbara axial.
Anọ n'ahịrị tapered ala amị
The arụmọrụ nke ụdị amị bụ ihu ọma otu ihe ahụ dị ka nke abụọ n'ahịrị tapered ala agba, ma ọ nwere ike ibu ọzọ radial ibu karịa abụọ n'usoro tapered ala agba, ma ya ịgba ọsọ bụ ala. A na-ejikarị ya eme ihe na igwe dị arọ dị ka igwe na-agagharị.
The kọntaktị n'akuku nke tapered ala agba na raceway bụ agbanwe, nke na-eme ka etinyere axial na radial ibu ruru nwere ike dechapụ n'ụzọ ọ bụla; mgbe n'akuku abawanye, o nwere ukwuu axial ibu amị ikike.
Fossa nwere ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, gụnyere ihe ndị nwere ike iwepụ, nke na-eme ka ọ dị mfe ịgbanwe na ngwa.
A na-ejikarị ụdị agba a eme ihe na:
Ugbo ala maka ugbo ala, ulo oru na ugbo
Nzipu (nnyefe na esi)
Nke gara aga: * Tụkwasị na Roller biarin
Osote: QYBZ Deep uzo Ball Iburu m
QYBZ akpọrọ akpọre agba biarin II
QYBZ Deep uzo Ball Iburu II
QYBZ Spherical Roller Bearings M